Jubbaland oo ka hadashay wafdiga Dowladda Federaalka ee Gobolka Gedo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Jubbaland oo ka hadashay wafdiga Dowladda Federaalka ee Gobolka Gedo
Jubbaland oo ka hadashay wafdiga Dowladda Federaalka ee Gobolka Gedo
Madaxweyne Kuxigeenka 1aad ee Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay xiisadda Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo, arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo warbixintii ay soo saareen Guddigii Urur Goboleedka IGAD, ee baarayay xiisadda xuduudda Beled Xaawo iyo Mandhera.
Madaxweyne Kuxigeenka ayaa sheegay inaanu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cidina waxba tari karin, haddii aanu ku dhaqmeyn xeerkii iyo sharcigii uu ku dhaartay.
Sidoo kale waxaa uu soo hadalqaaday wafdigii ka socday Dowladda Federaalka ee shalay gaaray Gobolka Gedo, si ay xaaladda u soo qiimeeyaan, ka dib dagaalkii qaraaraa ee Isniintii ka dhacay Degmada Beled Xaawo.
“Beled Xaawo, haddaad adigu u hiilin weyday xeerka iyo sharciga aad ku dhaaratay, haddee cidna waxba matari kartit. Waxaan ognahay in Wasiiro Soomaaliyeed iyo madax Soomaaliyeed, Xamar laga diray ay halkaa aadeen. Ma xaq baa?” Ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan, Madaxweyne Kuxigeenka 1aad ee Jubbaland.
Sidoo kale waxaa uu ka hadlay maxaabiistii Ciidamada Jubbaland looga qabtay Dagaalkii Degmada Beled Xaawo, kuwaa oo sida uu sheegay in barraha bulshada hortooda lagu jirdilay. Falkaasi ayuuna ku sheegay wax layaab leh oo laga xishoodo.
“Dowladda Federaalka Somaliya yaa masuul uga ah ama dhigeeda uga ah Jubbaland? Waa State-kii hoggaankiisi weeye. Marka inaad shaarkii Somaliya, masuuliyaddii iyo dhaqaalihii uu caalamka ku siiyay aad Somaliya u adeegsato oo wiilashii Soomaaliyeed oo Shabaabka la diriraayay aad adigu madaxda u ahayd, intaad qabatay barraha bulshada hortoodo ku jirdisho, oo tiraahdo been sheega, wax layaab leh iyo wax laga xishoodo weeye.” Ayuu yiri Madaxweyne Kuxigeenka.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in weli ay taagan yihiin caqabadaha ku gadaaman doorashooyinka dalka, isagoona sheegay in loo baahanyahay inta leesku yimaado in si dhow looga hadlo tabashooyinka ka jira doorashooyinka dalka. Waxaa uu ku baaqay in Madaxweyne Farmaajo uu qaato masuuliyadda ka saaran, shir-na uu isugu yeero dhinacyada ay khuseyso, isla-markaana aanu waqtiga isaga lumin waxaan waxba u tareynin, haddii kalena laga dhexli doono masuuliyad xumo iyo fowdo, taasoo uu masuuliyadeeda hadhow isaga qaadi doono, sida uu yiri.
Ugu dambeen Maxamuud Sayid Aadan ayaa soo dhaweeyay warbixintii Guddiga Ururka Goboleedka IGAD, ee Kenya looga bari-yeelay inay fara-gelin ku hayso arrimaha gudaha ee Somaliya.
Guddigu waxay warbixinta ku sheegeen, ka dib booqasho ay ku taggeen labada dal inaanay cadeymo sax ah u heyn in Kenya ay fara-gelisay arrimaha Somaliya, taasoo ay Dowladda Somaliya ku gacan-seyrtay.
Previous articleMareykanka oo baaq u jeediyay Madaxweyne Farmaajo iyo Dowlad Goboleedyada
Next articleWareysi: Hooyada dhashay gabadhii 8 jirka ee kufsiga & dilka loo gaystay